China Modern Simple mgbidi n'ịnyịnya ígwè ogbe bike emepụta na suppliers | Shengrui
Modern Simple mgbidi n'ịnyịnya ígwè ogbe
Igwe dị elu, osisi / achara.
Ihe: Igwe dị elu, osisi / achara.
Imecha: Inogide ntụ ntụ ntekwasa imecha na nwa, na-acha ọcha na agba.
Akụkụ ngwaahịa (WxDxH): 24 x 30 x 10 cm ma ọ bụ ahaziri ya.
Max buru ibu: 20 n'arọ
Ogologo ogwe aka Max: M: 48 cm | L: 68 cm
Akuku nke nnyefe: Ugba igwe, ihe eji arị elu, ndebiri ndebiri
Max elu tube n'obosara: 55 mm | Adabara niile nkịtị n'elu tube shapes
Ngwugwu: 1pc / plastic bag / box.10pcs / katọn.
Ọdịdị dị mfe, nke oge a, ọmarịcha echiche maka ijide igwe kwụ otu ebe na mgbidi iji chekwaa ohere.
A ga-etinye ngwaike ngọngọ.
Ahaziri imewe, ngwugwu ga-anabata.
Ugwu mara mma maka igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe.
Easy njikwa na mgbidi arịọnụ incl. idozi mgbidi.
GEFKWUO: Na S-RACK ị na-eweta igwe kwụ otu ebe gị na nke gị ọnụ. A na-enweta ya na oji ma ọ bụ ọcha. Ihe ejikọtara ọnụ na-enye gị ohere nchekwa ọzọ maka ngwa gị. The ọtụtụ ọdịiche nke igwe mgbidi ugwu imeghari optimally ka ndụ ụlọ na gị igwe kwụ otu ebe.
MGBE A NA-AH &GH & & EGO: Mgbidi mgbidi dị ngwa ma dị mfe. N'ihi ngwongwo a na-enye na ihe eji egwu mmiri nwere ọgụgụ isi, onye na-ejide ya nwere ike ịbanye na ole na ole dị mfe. Ghara imebi agba nke igwe, a na-etinye etiti ahụ na mmetụta dị nro.
MAL & NA MB PR: A na-arụpụta akụkụ nke ọ bụla site na ndị omenkà mpaghara. Na PARAX, a na-arụ ọrụ ndị a ma jikọọ n'otu ngwaahịa.
D-STRAP (adịghị etinye ya): Iji gbochie ụkwụ ihu ihu ka ọ gbanwee gaa n'akụkụ ma hapụ ọnya ojii na mgbidi, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ eriri akpụkpọ anụ PARAX na Velcro. Nke a na - edozi ihe ọ bụla ị na - eme naanị otu aka na ntanetị. Nwere ike ịchọta D-STRAP na ụlọ ahịa anyị. Na-adaba na mgbidi niile nke PARAX na mgbidi ígwè ndị ọzọ niile.
Nke gara aga: Ime ụlọ ịsa ahụ ụlọ
Osote: Ejiri akwukwo ugbo na-ese n’elu mmiri